နားထောငျမိတဲ့ ပရိတျသတျတှအေားလုံးမကျြရညျကြ စတေဲ့အထိ ဝမျးနညျးစရာကောငျးလှနျးတဲ့ အိုငျးရငျး ဇငျမာမွငျ့ရဲ့ မိဘမဲ့သီခငျြးလေး – XB Media & News
အနုပညာသကျတမျးတဈလြှောကျမှာ အသံစူးစူးလေးနဲ့ အသညျးကှဲသီခငျြးတှနေဲ့ အောငျမွငျမှုရရှိခဲ့တဲ့ အဆိုရှငျကတော့ အိုငျးရငျးဇငျမာမွငျ့ ပဲ ဖွဈပါတယျနျော.. အိုငျးရငျးကတော့ အနုပညာ ပါရမီပါသူပီပီ သူမ သီဆိုလိုကျတဲ့ သီခငျြးတိုငျးကိုလညျး ပရိသတျတှကေ အားပေးနှဈ သကျ ကွတာ ဖွဈပါတယျ။
သူမက ကိုဗဈကာလမှာ မိခငျဖွဈသူကို ဆုံးရှုံးထားရတာ ဖွဈတဲ့အတှကျလညျး မိဘနဲ့ပကျသကျရငျ ခံစားခကျြကွီးမားသူလေး ဖွဈပါတယျ နျော. .. ဒီနလေ့ေးမှာတော့ အိုငျးရငျး က ” မိဘမဲ့ကလေးတဈယောကျရဲ့ခံစားခကျြပါIreneရဲ့ပထမဆုံးမိဘမဲ့ဘဝနဲ့Christmas ခံစားခကျြ အားလုံးပဲMerry Christmas ပါနျော ” ဆိုပွီး သီခငျြးလေးနဲ့အတူ တငျပေးလာတာ ဖွဈပါတယျနျော..
နားထောငျမိသူတိုငျး ငိုခဲ့ရတဲ့ အိုငျးရငျးသီခငျြးလေးကိုလညျး ပရိသတျကွီးလညျး အားပေးစကားလေး ရေးပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော…
အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ အသံစူးစူးလေးနဲ့ အသည်းကွဲသီချင်းတွေနဲ့ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ အဆိုရှင်ကတော့ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. အိုင်းရင်းကတော့ အနုပညာ ပါရမီပါသူပီပီ သူမ သီဆိုလိုက်တဲ့ သီချင်းတိုင်းကိုလည်း ပရိသတ်တွေက အားပေးနှစ် သက် ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမက ကိုဗစ်ကာလမှာ မိခင်ဖြစ်သူကို ဆုံးရှုံးထားရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း မိဘနဲ့ပက်သက်ရင် ခံစားချက်ကြီးမားသူလေး ဖြစ်ပါတယ် နော်. .. ဒီနေ့လေးမှာတော့ အိုင်းရင်း က ” မိဘမဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ပါIreneရဲ့ပထမဆုံးမိဘမဲ့ဘဝနဲ့Christmas ခံစားချက် အားလုံးပဲMerry Christmas ပါနော် ” ဆိုပြီး သီချင်းလေးနဲ့အတူ တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..
နားထောင်မိသူတိုင်း ငိုခဲ့ရတဲ့ အိုင်းရင်းသီချင်းလေးကိုလည်း ပရိသတ်ကြီးလည်း အားပေးစကားလေး ရေးပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်…